Aiza no hitadiavana TOP baklinks?
Ny valiny dia sarobidy ho an'ny tranonkala rehetra, satria mitondra fifamoivoizana mitodika any amin'ny tranonkala iray izy ireo ary manangana ny mason'ny mason'ny mason'ny fikarohana. Amin'ny fampiasana backlinks, dia manana fahafahana ianao hahatratra mpihaino tsy afaka ny handoa vola amin'ny mpanjifa.
Ny fananganana ny rohy dia toy ny ampahany manan-danja amin'ny tetik'asa fanatsarana ny karazan-tsindrim-peo ho an'ireo antony marina ireo. Na izany aza, tsy mety ny mino fa ny rohy rehetra dia hitondra ny lanjany toy ny tsy mahazatra azy. Misy antony maromaro mila eritreretinao hanatsara ny toerana misy anao, indrindra raha ny hahitana ny fahafahanao hisarihana.
Ao amin'ity lahatsoratra ity, dia hahita fanazavana sarobidy momba ny karazana rohy ivelany sy fomba ahafahana mahazo rindran-damosina ambony eo amin'ny tranokalanao ianao.
Karazana rohy ekena
Lisitry ny rohy dia ny karazana rohy manerantany izay azo avy amin'ny tranonkala izay manompo ho toy ny trondro ho an'ny olona Mitady karazana vokatra na serivisy manokana. Ny torolàlana an-tserasera dia manome fepetra ahafahana mahazo rindran-damina amin'ny tetibola kely raha manaiky ny fepetra maimaim-poana sy karama izy ireo. Izany no vahaolana tsara indrindra ho an'ireo izay mikatsaka ireo fahafahana hanangana rohy fitehirizana maromaro. Ny finday mifototra amin'ny famandrihana dia mitaky fandoavam-bola ho an'ny tolotra nataony isam-bolana na isam-bolana.
Raha asehonao amin'ny tari-dalana ianao, dia manome fahafahana anao hizotra mankany amin'ny loharanon-tranonkalanao votoatim-pifandraisana sy serasera. Raha manana tranonkala tsara tarehy ianao ary afaka manome ny votoatin'ny kalitao tsara, dia azo inoana fa ny mpitsidika anao dia hivadika ho mpanjifa.
Backlinks amin'ny redirection
Redirection amin'ny fanontana dia manintona ny traikefa ara-biôlôjia amin'ny tranokala iray ary manatsara ny fahatsapana ny orinasan-tserasera.Ny lanjan'ny fanontana dia manana lanjany betsaka raha avy amin'ny loharanom-pahefana avo lenta (f. f. Ireo boky avo lenta toy ny The Daily Mail na The Huffington Post). Ireo sehatra an-tserasera ireo dia matoky tanteraka sy ankasitrahan'ny mpamily sy ny mpanjifa amin'ny ankapobeny, noho izany dia tsy azo zakaina ny lanjan'ny rakitra. Ny rohy tsirairay avy dia mametraka fitokisana amin'ny tranokalanao. Amin'ny ankapobeny, ny rohy rediredy dia mora, fa ny fiverenana azonao avy amin'izy ireo dia ho ambony kokoa.
Fomba hahazoana TOP backlinks amin'ny tranokalanao
Alefaso aloha ny momba ny lisitry ny directory. Ny fahafahana tonga lafatra hikarakarana rohy fitaterana an-tsokosoko dia ny fitadiavana ny karazan-tsarimihetsika tsara indrindra misy manam-pahefana. Manoro hevitra mafy anao aho mba hisoroka ny lisitra ankapobeny, satria tsy hifantoka amin'izay mety ho mpanjifa ianao. Raha tokony ho izany dia mila mifantoka amin'ny finday izay manokana ny tsenan'ny orinasa sy ny orinasa ianao. Ny fitaovam-pitadiavana dia hanome maotera sy lanjany bebe kokoa amin'ny tranokala misy tambajotra, manome fahafahana ny orinasanao an-tserasera mba hahazoana fahefana avy amin'ny tranokalan'ny lalaon'ny niche.
Ankehitriny, andeha isika hiresaka momba ny famoahana rohy amin'ny rohy mankany amin'ny tranokalanareo. Ny fahafahana tonga lafatra mba handraisana rohy amin'ny rindrambaiko dia ny famoronana famoaham-baovao izay ahafahana manonona vaovao vitsivitsy. Izany no fomba tsara indrindra hanentanana ny masonareo sy hampiroboroboana ny vokatrao na ny serivisinao amin'ny endrika tsy misy dikany sy miafina. Tsara ny mampiasa andian-dahatsoratra sarotra sy zava-mahaliana ao amin'ny famoahana gazety anao mba hiantsoana mpihaino marobe ary manintona kokoa ny mpanjifa mety Source .